प्रियंका र निकको दिल्ली रिसेप्शन पार्टीमा मोदी पनि पुगे !
एजेन्सी । अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र निक जोन्सको दिल्ली रिसेप्शनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि विशेष पाहुनाको रुपमा पुगेका छन् । रिसेप्शन पार्टीमा पुगेका मोदीले स्टेजमा पुगेर निक जोन्सका आमा बुबालाई हात जोड्दै नमस्कार गरेका छन् । त्यसोत प्रियंका र निक पनि स्टेजमा चढेर आफ्नो आमा बुबासँग फोटो खिचाएका छन् ।
‘जानी नजानी’ को फर्स्टलुक सार्वजनिक
काठमाडौं । निर्देशक बसन्त अधिकारी पहिलो चलचित्र ‘जानी नजानी’ को फर्स्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ । चैत १ गते सार्वजनिक हुने चलचित्र चलचित्रको फर्स्टलुक पोस्टरमा मनिष श्रेष्ठ, निरिशा बस्नेत, सन्नी सिंह र नम्रता श्रेष्ठ फिचर्ड छन् ।
‘सभर लभ’को पहिलो गीत ‘साया’ रिलिज
काठमाडौं । फिल्म ‘सभर लभ’को पहिलो गीत रिलिज भएको छ । फिल्ममा समावेश गरिएको ‘साया’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो ।
‘रणवीर’ टिजरः सुशिल र प्रशान्तको टकराव
काठमाडौं । फिल्म ‘रणवीर’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक फिल्मको टिजर एक्शन नै एक्शनले भरिएको छ । सार्वजनिक टिजरमा नायक सुशिल सिटौला र प्रशान्त ताम्राकारलाई एक्सन अवतारमा देखाइएको छ ।
टुँडिखेलमा लाउरे र सुगम गाउने स्वस्तिमा नाच्ने !
काठमाडौं । मङ्सिर २२ गते शनिवार टुँडिखेलमा आयोजना हुन लागेको ‘रग्बी फेस्टिभल तथा लाइभ म्युजिक’ कार्यक्रममा नेपाली संगीत तथा फिल्म क्षेत्रमा २ दर्जन भन्दा बढी कलाकारले एकै मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुती दिने भएका छन् ।
बिधान कालीकोटेको ‘जानी नजानी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । अमेरिकामा बस्दै आएका गायक बिधान कालीकोटेको स्वर रहेको गीत जानी नजानीको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । करिब १ दर्जन गीतमा स्वर भरेका गायक कालीकोटेले हालैमात्र बजारमा ल्याएको गीतमा गायिका राजेन्द्र गौतमका शब्द शृजना समावेश छन् । तुला पर्वतको संगीत रहेको गीतमा गायिका तथा मोडल शृषा कुँवरको अभिनय रहेको छ ।
नवीन पौडेलको लोक देउडा ‘घर मेरो सुदूरपश्चिम’ सार्वजनिक
धनगढी । गायक नवीन पौडेलको लोक देउडा गीत ‘घर मेरो सुदूरपश्चिम’को धनगढीमा सार्वजनिक गरिएको छ।
दीपिका र रणवीरको रिसेप्शनमा नयाँ जोडीको दमदार इन्ट्री, मलाइका र अरबाज पनि के कम !
नयाँ दिल्ली । अभिनेता रणवीर सिंह र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको मुम्बई रिसेप्शनको केही तस्वीर र भिडियोहरु सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ ।
दक्षिण भारतीय फिल्ममा जमेका कमेडियनको कमाइ कति ?
फिल्ममा कमेडियनको भुमिकाले धेरै अर्थ राख्छ । यही कारणले हरेक फिल्ममा कोही न कोही कमेडियन भएकै हुन्छन् । बलिउडमा जस्तै साउथ फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि केही कमेडियन धेरै नै लोकप्रिय छन् ।